जीसस क्राइष्टको ज्ञान, विश्वव्यापी चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
धेरै मानिसहरू येशूको नाम जान्दछन् र उनको जीवनको बारेमा धेरै जान्दछन्। तिनीहरू उनको जन्म मनाउँछन् र उनको मृत्युको सम्झना गर्छन्। तर परमेश्वरको पुत्रको ज्ञान धेरै गहिरो जान्छ। आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा केही समयअघि, येशूले आफ्ना अनुयायीहरूका लागि यो ज्ञानको लागि प्रार्थना गर्नुभयो: "तर अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईं, एकमात्र सत्य परमेश्वर, र जसलाई तपाईंले पठाउनुभएको छ, येशू ख्रीष्टलाई चिन्नेछन्" (यूहन्ना १:17,3:१)
पावलले ख्रीष्टको ज्ञानको बारेमा निम्नलिखित कुरा लेखे: "तर मैले प्राप्त गरेको कुरा नै मैले ख्रीष्टको खातिर हानि गनेको छु; हो, अब म, मेरा प्रभु ख्रीष्ट येशूको अत्यधिक ज्ञानलाई नोक्सान गर्न पनि सबै कुरा गर्दछु, जसको खातिर मैले सबै कुरा गुमाए। र म फोहोरलाई आदर गर्दछु ताकि म ख्रीष्टलाई जित्न सक्छु " (फिलिप्पी 3,7..–-–)
पावलका लागि, ख्रीष्टको ज्ञान अपरिहार्यको बारेमा हो, अरू सबै कुरा महत्वहीन थियो, उनले अरू सबै कुरालाई फोहोर नै ठाने, फोहोर फाल्ने कुराको रूपमा लिए। के पावलको निम्ति ख्रीष्टको ज्ञान हाम्रो लागि क्रमिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ? हामी यो कसरी पाउन सक्छौं? यो कसरी व्यक्त हुन्छ?
यो ज्ञान हाम्रो सोचमा मात्र रहेको कुरा होइन, यसले ख्रीष्टको जीवनमा प्रत्यक्ष सहभागिता समावेश गर्दछ, पवित्र आत्माको माध्यमबाट परमेश्वर र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टसँग बढ्दो मेलमिलाप। यो परमेश्वर र उहाँको पुत्रसँग एक भएको छ। भगवानले हामीलाई यो ज्ञान एक पटक झर्ने मा दिनुहुन्न, तर हामीलाई टुक्रा-टुक्रा गरेर दिनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई अनुग्रह र ज्ञानमा बढेको चाहनुहुन्छ। (२. पेट्रो 2,.१3,18)
त्यहाँ अनुभवको तीन क्षेत्रहरू छन् जुन हामीलाई बढ्न सक्षम गर्दछ: येशूको अनुहार, परमेश्वरको वचन, र सेवा र कष्ट।
१. येशूको अनुहारमा हुनुहोस्
यदि हामी केहि ठ्याक्कै जान्न चाहन्छौं भने हामी यसलाई नजिकबाट हेर्दछौं। हामी निष्कर्षहरू निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं भनेर अवलोकन र परीक्षण गर्छौं। यदि हामी व्यक्तिलाई जान्न चाहन्छौं भने हामी विशेष गरी अनुहार हेर्छौं। येशूको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हो। तपाईं येशूको अनुहारमा उहाँलाई र ईश्वरको धेरै देख्न सक्नुहुन्छ! येशूको अनुहार जान्नु मुख्यतया हाम्रो हृदयको कुरा हो।
पावल "हृदयका उज्यालो आँखा" को बारेमा लेख्छन् (एफिसी १:१:1,18) जसले यो चित्र बुझ्न सक्छ। के हामीले गहिराइले हेर्छौं त्यसले हामीलाई प्रभाव पार्छ, जुन हामी भक्तिले हेर्छौं जुन हामी परिवर्तन हुन्छौं। दुई बाइबलीय खण्डहरूले यस कुरा औंल्याउँछ: "किनकि जसले अन्धकारबाट ज्योतिलाई बोलाउनुहुने परमेश्वरले येशू ख्रीष्टको अनुहारमा परमेश्वरको महिमाको ज्ञानको ज्ञानको निम्ति हाम्रो हृदयमा ज्योति बनाउनुभएको छ" (२ कोरिन्थी::))।
"तर हामी सबैले प्रभुको महिमालाई एक अस्पष्ट अनुहारको साथ प्रतिबिम्बित गर्दछौं र उही छविमा रूपान्तरित हुन्छौं, महिमादेखि महिमासम्म, अर्थात् प्रभुको आत्माले"। (२ कोरिन्थी १ 2:१:3,18)।
हृदयको आँखाले नै हामीलाई परमेश्वरको आत्माद्वारा येशूको अनुहार हेर्न र परमेश्वरको महिमाको केहि देख्न अनुमति दिन्छ। यो महिमा हामीमा प्रतिबिम्बित हुन्छ र हामीलाई छोराको स्वरूपमा रूपान्तरण गर्दछ।
जसरी हामी ख्रीष्टको अनुहारमा ज्ञान खोज्छौं, हामी उहाँको स्वरूपमा परिवर्तन भएका छौं। "कि ख्रीष्ट विश्वासको माध्यमबाट तपाईको हृदयमा बस्नुहुन्छ, यसैले जडिएको र प्रेममा स्थापना गरिएको छ, तपाईले सबै सन्तहरूसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ कि त्यसको चौडाई, लम्बाई, उचाई र गहिराई के हो, र ख्रीष्टको प्रेमलाई चिन्न सक्नुहुनेछ, जे भए पनि सबैलाई ज्ञानले तपाईंलाई परमेश्वरको पूर्णतामा पूरा गर्नेछ भनेर बढ्ता पार्छ। अब हामी अनुभवी र ज्ञानमा वृद्धि भएको अनुभवको दोस्रो क्षेत्रतिर ध्यान देऔं, परमेश्वरको वचन। हामी ख्रीष्टको बारेमा के जान्न र जान्न सक्छौं, हामीले उहाँको वचनबाट सिकेका छौं "। (एफिसी २: १-3,17-१-19)
२ परमेश्वर र येशू बाइबलमार्फत आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ।
Lord प्रभु आफैले आफ्नो वचनमा कुराकानी गर्नुहुन्छ। जसले उहाँको वचन रेकर्ड गर्दछ उसले उसलाई स्वीकार गर्दछ। जसमा उहाँको वचन रहन्छ, उहाँ बस्नुहुन्छ। र जसले आफ्नो वचनमा रहन्छ ऊ उहाँमा रहन्छ। आज, जब मानिसहरू ज्ञानको खोजीमा छन् वा समुदाय चाहन्छन्, तब यो शब्दको दिशानिर्देशहरूको बिना शर्त अधीनतामा पर्याप्त जोड दिन सकिदैन। ख्रीष्टको स्वस्थ ज्ञान प्रभुको स्वस्थ वचनसँग जोडिएको छ। यिनीहरूले नै स्वस्थ विश्वास ल्याउँदछन्। त्यसकारण पावलले तिमोथीलाई यसो भने: the तस्वीरलाई दृढतासाथ समात्नुहोस् (ढाँचा) स्वस्थ शब्दहरू » (२ तिमोथी १:१:2)। (फ्रिट्ज बिन्दे - क्रिष्टको शरीरको सिद्धता »पृष्ठ) 53)
परमेश्वरसँग, शब्दहरू "मात्र" शब्दहरू छैनन्, ती जीवित र प्रभावकारी छन्। तिनीहरूले ठूलो शक्ति विकास गर्दछन् र जीवनको स्रोत हुन्। परमेश्वरको वचन हामीलाई दुष्टबाट अलग गर्न चाहन्छ र हाम्रो विचार र दिमाग शुद्ध गर्न चाहन्छ। यो सफाई थकाउने हो, हाम्रो शारीरिक दिमाग भारी बन्दुकको साथ जाँचमा राख्नु पर्छ।
आउनुहोस् हामी यसबारे पावलले के लेखेका थिए हेरौं: "किनकि हाम्रो नाइटथुडका हतियारहरू शारीरिक छैनन् तर किल्लाहरू नष्ट गर्न परमेश्वरले शक्तिशाली हुनुहुन्छ, ताकि हामी तर्क गर्न सकौं। भगवानको ज्ञानको बिरूद्ध उठ्ने हरेक उचाइलाई नष्ट गर्नु र भ्रममा पार्नु, र ख्रीष्टको आज्ञापालनको लागि प्रत्येक विचारलाई कब्जा गर्नु, तपाईंको आज्ञाकारिता पूर्ण भए पछि कुनै पनि अनाज्ञाकारिताको बदला लिन पनि तयार छ। (१ कोरिन्थी १२: -2-।)
यो आज्ञा पालन, जो यहाँ पावलले सम्बोधन गर्दछ, सफा गर्ने को एक महत्त्वपूर्ण भाग हो। शोधन र ज्ञान सँगसँगै जान्छ। हामी केवल येशूको अनुहारको उज्यालोमा अशुद्धताको पहिचान गर्न सक्दछौं र हामीले यसबाट मुक्त हुनुपर्दछ: "यदि परमेश्वरको आत्माले हामीलाई कुनै कमी वा ईश्वरसँग सहमत नहुने केही देखाउँदछ भने, हामीलाई कार्य गर्न बोलाइन्छ! आज्ञाकारिता आवश्यक छ। परमेश्वर यो ज्ञान चाहनुहुन्छ। ईश्वरीय परिवर्तनमा साकार हुन्छ। वास्तविक परिवर्तन बिना, सबै थ्योरी रहन्छ, ख्रीष्टको साँचो ज्ञान परिपक्व हुँदैन, यो ओइलिन्छ " (२ कोरिन्थी १ 2:१:7,1)।
Service. सेवा र कष्टको माध्यमबाट बढ्नुहोस्
जब हामी हेर्छौं र येशू हाम्रो सेवा र हाम्रो लागि उहाँ कष्ट भोग्नुहुन्छ भन्ने कुरा अनुभव गर्दछौं तब मात्र मानव दु: ख र अरूको सेवाको त्यसको अर्थ हुन्छ। सेवा र दु: ख, परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्टलाई चिन्ने उत्कृष्ट स्रोतहरू हुन्। सेवा प्राप्त उपहार को पारित छ। येशू यसरी सेवा गर्नुहुन्छ, उहाँ पिताबाट आफूले पाएको कुरामा लाग्नुहुन्छ। चर्चको सेवकाईमा हामीले यसै गर्नुपर्दछ। येशूले गर्नुभएको सेवा हामी सबैका लागि नमूना हो।
"अनि उनले केहि प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरूलाई, कोही प्रचारकहरूलाई, कसैलाई गोठाला र शिक्षकहरूलाई पवित्र आत्माको सेवाको निम्ति सुसज्जित गर्न, ख्रीष्टको शरीरको सुदृढीकरणका लागि दिए, जबसम्म हामी सबै विश्वास र ज्ञानमा एकताबद्ध हुँदैनौं। "परमेश्वरको पुत्र" (एफिसी २:१:4,11)।
आपसी सेवा को माध्यम बाट, हामी येशूको शरीर मा सही ठाउँमा र सही ठाउँमा राखिन्छ। तर उहाँ टाउकोको रूपमा सबै कुरा निर्देशित गर्दछ। टाउकोले चर्चमा विभिन्न बरदानहरू यसरी प्रयोग गर्दछ कि तिनीहरू एकता र ज्ञान उत्पन्न गर्दछन्। परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा व्यक्तिगत बृद्धि मात्र होइन, समूहमा पनि बृद्धि भएको छ। समूहका कामहरू बिभिन्न छन्, र अरूको सेवा गर्ने अर्को पक्ष पनि छ जुन ख्रीष्टको ज्ञानमा वृद्धि हुन्छ। जहाँ सेवा छ त्यहाँ कष्ट छ।
"यस्तो आपसी सेवा दु: ख ल्याउँछ, दुबै व्यक्तिगत र अरूसँग र अरूको लागि। जो यस त्रिपक्षीय कष्टबाट बच्न चाहन्छन् निस्सन्देह वृद्धि घाटा भोग्नेछन्। हामीले व्यक्तिगत रूपमा कष्ट भोग्नुपर्‍यो, किनकि क्रूसमा टाँगिनुपर्दा, मर्नुपर्‍यो र ख्रिष्टको साथ गाडिनुपर्दा हामीले आत्मसंयम गुमाउनुपर्‍यो। Risen One हामीभित्र बढ्दै जाँदा यो आत्म-अस्वीकार तथ्य बन्छ becomes (फ्रिट्ज बिंडे "ख्रीष्टको शरीरको पूर्णता" पृष्ठ) 63)।
"तर मँ चाहन्छु कि तपाईहरू र लाओडिसियाका बासिन्दाहरूलाई र मलाई देहमा नदेख्ने सबैको निम्ति म कस्तो ठूलो संघर्ष गर्दछु भनेर जान्न चाहन्छु ताकि उनीहरूको हृदयहरूलाई ताकीद, प्रेममा एकताबद्ध र पूर्ण निश्चयतासाथ समृद्ध तुल्याइदेऊ। "परमेश्वरको रहस्यको ज्ञानमा, जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसमा बुद्धि र ज्ञानका सबै खजानाहरू लुकेका छन्" (कलस्सी १: २ 2,1-२3)
हन्नेस Zaugg द्वारा